I-AddEvent: Faka kwi-Calendar Service yamawebhusayithi nama-Newsletter | Martech Zone
NgoLwesithathu, ngoMashi 17, 2021 UMsombuluko, May 16, 2022 Douglas Karr
Ngezinye izikhathi, kuvame ukuba yimisebenzi elula kunazo zonke ebangela abathuthukisi bewebhu izinhlungu ezinkulu zekhanda. Enye yazo ilula Faka kukhalenda inkinobho oyithola kumasayithi amaningi asebenza kuzo zonke izinhlelo zekhalenda eziku-inthanethi nangezinhlelo zokusebenza zedeskithophu.
Ngobuhlakani babo obungenamkhawulo, amapulatifomu okhiye wekhalenda awakaze avumelane ngemininingwane esezingeni lokusabalalisa imicimbi yomcimbi; ngenxa yalokho, ikhalenda ngalinye elikhulu linefomethi yalo. I-Apple neMicrosoft zamukelwe .ics amafayela njengefomethi… ifayela lombhalo elicacile elinemininingwane ekulo. I-Google, njengensizakalo eku-inthanethi, isebenzisa i-API yayo ukucubungula imininingwane yomcimbi.
Yini ifomethi ye-ICS
Ukucaciswa Kwezinto Eziyisisekelo ze-Internet Calendaring and Scheduling Core wuhlobo lwemidiya oluvumela abasebenzisi ukugcina nokushintshanisa idatha yekhalenda nokuhlela okufana nemicimbi, ama-to-dos, okufakiwe kwamaphephabhuku, nolwazi lwamahhala / olumatasa. Amafayela afomethwe ngokusho kwemininingwane ngokuvamile anokwandiswa kwama-.ics.
I-AddEvent iyinsizakalo enhle enkulu ekhipha ikhodi edingekayo namafayela ukwengeza noma ukubhalisela ama-Apple Calendars, amakhalenda akwa-Google aku-inthanethi, i-Outlook, i-Outlook.com, ne-Yahoo! eku-inthanethi amakhalenda. I-AddEvent inikeza amathuluzi womabili aku-inthanethi kanye ne-API yokwenza ngezifiso izixhumanisi zakho ze-Add to Calendar nezinkinobho noma ngabe ungathanda.
Izinketho ze-AddEvent namathuluzi afaka phakathi
Faka ku-Inkinobho Yekhalenda (kumawebhusayithi) - indlela esheshayo futhi engenabunzima kubasebenzisi bakho yokwengeza imicimbi yakho kumakhalenda abo. Kulula ukufaka, ukuzimela kolimi, indawo yesikhathi, nokuhambisana kwe-DST. Isebenza kahle kuzo zonke iziphequluli zesimanje, amaphilisi, namadivayisi eselula.
Ikhalenda Lokubhaliselwe (imicimbi eminingi) - engeza kalula imicimbi eminingi kumakhalenda womsebenzisi wakho ngokubhalisela ikhalenda oyakhayo. Ungenza ngisho noshintsho kukhalenda lakho, futhi lolo shintsho luzovela kuwo wonke amakhalenda wakho wababhalisile.
Izenzakalo (okwezincwadi zezindaba nokwabelana komphakathi) - vumela abasebenzisi ukuthi bangeze imicimbi yakho kumakhalenda wabo noma ngabe bafunda kuphi ngawo - kungaba izincwadi zezindaba, inkundla yezokuxhumana efana ne-Facebook noma i-Twitter, noma amathuluzi omkhankaso afana I-Mailchimp, Marketo, noma Salesforce. Ithuluzi lomcimbi le-AddEvent likwenza kusheshe futhi kungabi buhlungu kuwe ukuthi udale umcimbi ngekhasi lawo lokubikezela ongakwazi ukwabelana ngalo ezinkundleni zokuxhumana, noma ulisebenzise njengesixhumanisi sezincwadi zezindaba namathuluzi omkhankaso.
Indlela ye-URL eqondile (nama-API's) - isixhumanisi esenziwe ngezifiso esingasetshenziselwa ukudala umcimbi endizeni, noma ukuthumela abasebenzisi bakho kwinsizakalo yabo yekhalenda lapho bengangeza khona umcimbi wakho, noma bahlanganise umcimbi wakho ne-imeyili oyithumela kubasebenzisi bakho .
Yipulatifomu eqinile, elula, futhi esebenzisekayo esiza ababhalisile bakho kanye nabalingani bebhizinisi. Noma ngabe wakha ipulatifomu futhi udinga ukusebenza kokwengeza kukhalenda noma uma nje uyibhizinisi elisabalalisa isikhumbuzi somcimbi wawo wonke umuntu, i-AddEvent iyinkundla enhle. Banikela futhi:
IkhalendaX - ikhalenda elingashumeka, ikhalenda yokubhalisa, kanye nensizakalo yokuqoqa idatha konke kuhlanganiswe kube munye. Njengekhalenda elingashumeka, lenza imicimbi yakho ibe nobungane kubasebenzisi bakho ngokubanika ikhalenda langempela abazolibuka kuwebhusayithi yakho. Njengekhalenda lokubhalisile, livumela abasebenzisi bakho ukuthi bangeze kalula imicimbi yakho kumakhalenda abo futhi bahlale besesikhathini kunoma yiluphi ushintsho lomcimbi (olufana nethuluzi Lokubhaliselwe Lokubhaliselwe, noma kunezinketho eziningi nokuhlaziya okujulile).
Ama-Analytics - Landelela ukuvezwa, umcimbi-uyangeza, ababhalisile bekhalenda, futhi nokuningi. Izibalo zinikeza idatha ebalulekile mayelana neyakho amakhalenda nemicimbi yenziwe ngeDeshibhodi noma ifayili le- Ikhalenda Nemicimbi ye-API.
Zama i-AddEvent Mahhala
Ukudalula: Martech Zone usebenzisa izixhumanisi eziphethwe kulesi sihloko.
Tags: engeza kukhalendaengeza kusixhumanisi sekhalendai-addeventikhalenda le-apulaikhalenda APIikhalenda okubhaliselweikhalenda Xikhalenda elingashumekaikhasi lokufika lomcimbiisixhumanisi somcimbiikhalenda le-googlei-mailchimpumabhebhanabuka ikhalendaikhalenda ye-outlook.comsalesforceikhalenda yokubhalisaikhalenda ye-yahoo
Isifiso: Ukuqina Ukuphatha, Ukukhuthaza, nokukhulisa Ukusebenza Kweqembu Lakho Lokuthengisa